Daraasad Caafimaad”Jimicsi La’aanta Iyo Fadhiga Badan Oo Noqday Dilaha Qarsoon | Berberatoday.com
Daraasad Caafimaad”Jimicsi La’aanta Iyo Fadhiga Badan Oo Noqday Dilaha Qarsoon
Hargeysa(Berberatoday.com)-Khubarada dhinaca caafimaadka ayaa walaac ka muujisay in wax aad u yar laga qabtay sidii loo yarayn lahaa saameynta ka dhalata dhaqdhaqaaq la’aanta ama jimicsiga ku yar dadka ku nool caalamka. War bixin ay soo saartay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu qiyaasay in afar meelood hal meel oo ka mid ah dadka dunida – oo ah tiro dhan 1.4 bilyan oo ruux aanan samaynin jimicsi ku filan, tiradan ayaana sare u sii kacaysay tan iyo sannadkii 2001-dii.
Hay’adda Caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in jimicsi la’aantu ay hadda noqotay dilaaga cusub ee bani’aadanka, maadaama ay dad fara badan ka dhaxleen cudurro aan la daaweyn Karin. Waxa ay sidoo kale saameyn ballaadhan ku yeelatay wakhtiga uu qofku noolaan karo, waxaana la sheegayaa in ay keeneyso cimri deg deg aad u u heer sarreeya. Haweenka ayaa si guud uga dhaqdhaqaaq yar ragga marka la eego dhammaan dalalka laga sameeyay daraasaddan. Hase ahaatee dalalka ku yaalla Bariga iyo Koonfurta-bari ee qaaradda Aasiya ayaa si weyn uga duwan, dhanka dhaqdhaqaaqana kaga fiican waddamada kale ee ku yaalla Koonfurta Aasiya, Bartamaha Aasiya, Bariga dhexe iyo Waqooyiga Africa